“Koobka AWCON Waxa Qaadaysa Cameroon” – Raissa Feudjio
HomeAfrica“Koobka AWCON Waxa Qaadaysa Cameroon” – Raissa Feudjio
03/12/2016 Abdiwahab Ahmed
Laacibka xulka haweenka Kubada cagta ka ciyaarta khadka dhexe dalka Cameroon Raissa Feudjio ayaa shaaca ka qaaday in xulkeedu qaado donan ama ku guulaysanayan koobka Africa Women’s Cup of Nations islamarkana ka badinayan xulka Nijeeriya, waxana kulankasi ka dhici dona garoonka magalada Yaounda maalinta sabtida ( December 3, 2016).
Laacibkan 21jirka ah ee khadka dhexe ka ciyaarta kooxda Trabzon Idmanocagi ayaa ku adkeesanaysa in ay kooxdaydu rajeenayso guusha ku abaal maariyaan dhamaan shacabka dalka Cameroon iyago xulka Nijeeriya ee logu yeedho African Queens ka qaadaan koobka garoonka Ahmadou Ahidjo Stadium.
“Mar walba waxa anuu ku jirna jiidka hadaafkayaga oo ahaa ila imikana tagan, hanashada koobka, qoorshayagii oo ahaa in Shanta kulan wada badino. Ilaa hadana, wax khalad ah manan samayn anago isku dubaan iskuna kaalsoon.
Shacabk dalka Cameroon waxa anuu ugu ballaanqaadnay in kulanka finaylka guulaysanayno oo koobka anuu haysa no, sababto ah anaga xaaq uu leh.
Guushii anuu ka guulaysanay xulka Ghana oo imika la ilowbay islamarkana anuu kulanka finaylka maskaxda inagu jirto, taasina ay tahay guusha kulaanka iyo koobka. Sidoo kalena waa fursaad Qaali ah xulka Nijeeriya ka aarsano iyago dhowr ciyarood oo hore sidan oo kale naga badiyeen, lakinse waxa ann fileyaa doorkan khaladadki anan samenayn maalinta Sabtida.
Wax walba wanu samayn doona, sidii anuu koobka uu qaado.” Sidana waxa tidhi Raissa Feudjio oo Warbaahinta uu waramayse.
Conte Oo Loo Magacaabay Tababaraha Xulka Talyaaniga
Tottenham Oo Guul-darradii Loogu Darayo Ganaax Wakhti Dheer Ah Oo La Saarayo Dela Alli
24/02/2017 Abdiwahab Ahmed